I-WTTC: ISaudi Arabia iza kubamba iNgqungquthela yeHlabathi yama-22 ezayo
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseSaudi Arabia zokuPhula » I-WTTC: ISaudi Arabia iza kubamba iNgqungquthela yeHlabathi yama-22 ezayo
Iindaba zeManyano • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zeShishini lokuhlangana • iintlanganiso • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Iindaba zaseSaudi Arabia zokuPhula • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Ukusukela kwasekuqaleni, xa ubhubhani wezisa uhambo lwamazwe ngamazwe phantse ukuma ngokupheleleyo, iSaudi Arabia ibonakalise ukuzibophelela kwayo ngokupheleleyo kwicandelo lethu, iqinisekisa ukuba ihleli iphambili kwi-ajenda yehlabathi.
I-Global Summit yonyaka ye-WTTC ngowona mnyhadala unempembelelo kwihlabathi kunye noKhenketho noKhenketho.
Umnyhadala eSaudi Arabia uza kulandela iNgqungquthela yeHlabathi elindelwe kakhulu eqhubeka eManila, ePhilippine.
Iinkcukacha ezithe vetshe ngeNgqungquthela yeHlabathi ye-WTTC e-Riyadh ziya kwaziswa ekuhambeni kwexesha.
The IBhunga leHlabathi lezoKhenketho noKhenketho (WTTC), emele icandelo lehlabathi lokuhamba kunye noKhenketho, ibhengeza ukuba i-22 yayond I-Global Summit iya kuba eRiyadh, ISaudi Arabia, ekupheleni kuka-2022.
I-Global Summit yonyaka ye-WTTC ngowona mnyhadala unempembelelo kwihlabathi kunye noKhenketho noKhenketho. ISaudi Arabia uye wakhokela indlela entsha yehlabathi 'yokulungisa ngokutsha ukhenketho' kwaye le ngqungquthela e-Riyadh iya kubona iinkokheli zoshishino ziqokelelana kunye nabameli bakarhulumente abaphambili ukuqhubela phambili inkxaso yecandelo lokubuyisela okuqhubekayo, ukuyihambisa kwikamva elikhuselekileyo, elizinzileyo, elibandakanyayo nelizinzileyo.
Umnyhadala eSaudi Arabia uya kulandela iNgqungquthela yeHlabathi ekulindeleke kakhulu ezayo eManila, ePhilippine, ukusuka nge-14-16 Matshi 2022.
Ukuthetha kwi-Future Investment Initiative e-Riyadh, ISaudi Arabia, uJulia Simpson, WTTC Umongameli kunye ne-CEO uthe:
Ukusukela ekuqaleni, xa ubhubhani uye wamisa uhambo lwamazwe ngamazwe phantse, iSaudi Arabia ibonakalise ukuzibophelela kwayo ngokupheleleyo kwicandelo lethu, iqinisekisa ukuba ihleli iphambili kwi-ajenda yehlabathi.
“Kube luncedo kakhulu ekukhokeleni ukubuyisela kwakhona icandelo elibaluleke kakhulu kuqoqosho, emisebenzini nakwindlela yokuphila kwihlabathi jikelele.
"Ngaloo nto sinombulelo kwaye sifuna ukuqaphela iinzame zabo ezimangalisayo ngokuzisa icandelo le-Global Travel & Tourism kuBukumkani kunyaka ozayo."
Obekekileyo uAl Khateeb, uMphathiswa wezoKhenketho ISaudi Arabia wathi:
“Ndiyasamkela isigqibo sokukhetha iSaudi Arabia njengelizwe eliza kusingatha elilandelayo WTTC I-Global Summit ngo-2022. Eli liqonga elibalulekileyo lecandelo labucala kunye norhulumente ukuba bahlangane ukuze baphinde bahlele ukhenketho kwixesha elizayo, kwaye kuyamangalisa ukubamba lo mcimbi eBukumkanini. Oku kukuqatshelwa kobunkokheli baseSaudi ukunceda icandelo lezokhenketho lwehlabathi ukuba liphinde libuyele, kwaye okubalulekileyo, lizinze ngakumbi. Ndijonge phambili ekwamkeleni onke amaLungu eWTTC kulo nyaka uzayo. ”
Ukuhambelana nesi sibhengezo, uphando lwamva nje oluvela kwi-WTTC lubonisa ukuba icandelo le-Middle Eastern Travel & Tourism limiselwe ukukhula nge-27.1% kulo nyaka ngaphambi kweYurophu kunye neLatin America.
Uphando lukwabonisa ukuba ukuba oorhulumente babeka phambili uHambo noKhenketho, imisebenzi kwicandelo inokufikelela kwi-6.6m ngo-2022, isondela kumanqanaba aphambi kobhubhane.